Manjaro ichagadzira Ubuntu uye ichagara kwechinguva muGNOME 3.38 | Linux Vakapindwa muropa
NeGNOME 40 pachave nekukosha kwemhando yepamusoro. Shanduko zhinji dzinozounzwa, senge idzo dzinozotibvumidza isu kudzora zvirinani neiyo yekubata pani, uye nekuda kwechikonzero ichocho, uye nekuti GTK 4.0 iri kutora nhanho dzayo dzekutanga, Canonical yakafunga kusaisanganisira muUbuntu 21.04, uye pamwe kubva pakananga kusvetukira kuGNOME 41 anotevera Gumiguru. Havasi ivo voga vakafunga kuisa mabhureki pakuuya kweGNOME 40, kunyangwe Manjaro ine zvimwe zvikonzero.
Sezvatinoverenga mukati shinda iyi kubva kuhurukuro yepamutemo, uye sezvatove isu mberi vhiki rapfuura, iyo Manjaro yazvino inoshandisa a sanganisa pakati peGNOME 3.38 Shell uye GNOME 40 kunyorera. Icho chikonzero ndechekuti izvo zvitsva zvinoshandiswa zvinoshandiswa zvisingakanganise kushandiswa kwakawanda, asi kubva v3.38 kusvika v40 yeGNOME Shell pane zvigadziriso zvinoda rimwe basa. Sarudzo yeGNOME yekufambisa nzvimbo dzekushandira kubva kumeso kuenda kune yakatwasuka ndeimwe yemakakatanwa shanduko uye haigone kuitwa zvishoma.
Manjaro anofanirwa kutsvaga mhinduro dzeGNOME 40
Nyowani dzekubata padhi dzekutsvagisa nzvimbo dzekushandira uye kupinda / kubuda mukutarisisa zvinogoneswa nekusarudzika muGNOME 40 Shell. Kutambanudza-minwe mitatu kuruboshwe kana kurudyi inofamba pakati penzvimbo dzekushandira, nepo minwe mitatu inosundira kumusoro ichipinda mukutarisa, uye kana iwe uchiramba uchisunda, inowedzera iyo yekutanga kuvhura. Kudhonza kweminwe mitatu munzira yakanaka kunokudzosera kunzvimbo yako yebasa yawakasarudza.
Vagadziri vedu vanofarira kutsvaga mhinduro kuti kutarisa kwedu kwakasarudzika kweManjaro Gnome irambe iripo uye iwe unogona kuzvisarudzira wega kana uchida kuchinjika yakatwasuka kana kuchengeta kufambidzana kwebasa kwakamira.
Vashandisi vanofarira kuyedza GNOME 40 Shell vanofanirwa kudaro kubva ku "Developer Staging" vhezheni inowanikwa pa Iyi link. Pane iyo ichazosvika yakagadzikana vhezheni, ivo havana kupa mazuva, asi haifanire kutora nguva yakareba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Manjaro ichagadzira "Ubuntu" uye ichagara muGNOME 3.38 kwechinguva, asi zvishoma pane Canonical
Taylan meurer akadaro
Kufananidza naUbuntu kwakadana pfungwa, nekuti ini ndakauya kuzoverenga kuti ndione kuti vaizoita hupenzi hwekumirira kwenguva refu, zvinoitika kuti hazvizove zvakadaro, zvakanaka, nekuti handifunge kuti zvinotora zvinopfuura mavhiki mashoma.
Pindura Taylan Meurer
EndeavorOS inotangisa yayo Kubvumbi 2021 ISO yatove neLinux 5.11 nedzimwe nhau